WPvivid Backup Plugin: Waa Aal bilaash ah oo lagu Wareejinayo Boggaga WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/WPvivid Backup Plugin: Waa Qalab bilaash ah oo lagu Wareejinayo Boggaga WordPress
WPvivid Backup Plugin: Waa Qalab bilaash ah oo lagu Wareejinayo Boggaga WordPress
Haddii aad waligaa eegtay waxa ay qaadanayso si loogu wareejiyo boggaga WordPress, waxaad ogtahay inaysan ahayn habka ugu fudud. Caawinaad la'aan plugin ama martigeliyahaaga mareegaha, waxay u baahan tahay soo dejin badan, soo dejin, iyo soo dejinta.
Nasiib wanaag, WPvivid Backup Plugin wuxuu ku wareejin karaa bartaada WordPress hal gujin. Marka lagu daro bixinta kaydinta tooska ah iyo hal-guji dib u soo celinta shaqeynta, plugin-kan waxtarka leh ayaa sidoo kale u haajirin kara goobtaada WordPress si aad u hesho domain cusub iyada oo aan wax dhib ah oo dhan.
Boostada ayaa ku bari doonta WPvivid oo ku tusi doonta sida ay kuugu caawin karto soo celinta, soo celinta, iyo wareejinta boggaga WordPress. Aan u gaadhno!
Maxaad Ugu Baahnaan Kartaa Jid Aad Ku Wareejin Karto Boggaga WordPress
Intarneedku waa muuqaal isbedelaya, mararka qaarna waa in website-kaagu la beddelo. Waxaa jira dhowr sababood oo ay u fiicnaan karto in boggaaga WordPress loo wareejiyo goob cusub. Bilawga, haddii aad dib u sumad samaynayso, boggaagi hore waxa laga yaabaa in aanu ku haboonayn goobtaada.
Haddii kale, haddii aad awooddo inaad hesho domain ka xoog badan, waxaad u wareejin kartaa goobtaada si ay uga caawiso inay soo jiidato mug weyn oo taraafikada hoos yimaada cinwaan awood badan. Ama, waxa laga yaabaa inaad si fudud ugu baahato inaad ka guurto galalkaaga mareegahaaga iyo xogta xogta deegaan horumarineed una guurto goob nool.
Ugu dambeyntii, xaaladaha qaarkood, u guurista domain cusub waxay noqon kartaa xalka ugu fiican ka dib markii goobtaadu heshay tiro badan oo ganaax ah. Dib u bilaabashada mararka qaarkood way ka fiican tahay habka soo kabashada dheer oo adag haddii goobtaadii hore aanu helin taraafikada.
Nasiib darro, sidii aan horay u soo sheegnay, u wareejinta goobtaada bog cusub ma ahan wax fudud. Qaar ka mid ah mareegaha ayaa ku caawin doona ama kuu qaban doona. Si kastaba ha ahaatee, inta badan waxay ku dalacayaan adeegan ama waxay kaa doonayaan inaad haysato mid ka mid ah qorshayaashooda qaaliga ah.
Ku wareejinta goobtaada gacanta had iyo jeer waa ikhtiyaar, laakiin waa khatar iyo sidoo kale adag. Haddii ay wax qaldamaan, waxaad waayi kartaa mareegahaaga. La'aanteed kayd ah si loo soo celiyo goobtaada, u haajiridda domain cusub waxay sababi kartaa dhibaatooyin ka badan inta ay xalliso.
Hordhac WPvivid Backup Plugin
Tani waa halka ay WPvivid Backup Plugin ka soo gasho
Kaydinta tooska ah ayaa si weyn loogu tixgaliyaa inay tahay dhaqanka ugu wanaagsan ee WordPress. WPvivid wuxuu awood kuu siinayaa inaad dejiso jadwal gurmad ah waxayna ku siinaysaa inaad si buuxda u maamusho nidaamka. Waxaad kaydintaada ku kaydsan kartaa bixiyeyaasha kaydinta daruuraha ee ugu sarreeya oo ay ku jiraan Dropbox iyo Google Drive, oo ku soo celi goobtaada hal gujin haddii ay wax qaldamaan.
Intaa waxaa dheer, WPvivid waxaa ku jira sifada socdaalka goobta si sahlan loo isticmaali karo kaas oo kaa caawin doona inaad u wareejiso boggaga WordPress meel cusub. Tani waxay awood kuu siin doontaa inaad ka fogaato habka waqti-qaadka ah ee ku wareejinta boggaaga gacanta, iyo kharashka ku bixinta martigeliyahaaga si uu u sameeyo.
Marka lagu daro maaraynta hawlahan, WPvivid waxay bixisaa sifooyinka soo socda:
Taageerada xog ururinta waaweyn (la tijaabiyay ilaa laba Gigabits).
Xakamee xadka kaabta.
Qaybinta kaabta si loo maareeyo cabbirka faylka.
Ma jiro xadka cabbirka faylka (marka laga reebo kuwa kaydintaada ama bixiyeyaasha martigelinaya).
Kartida lagu abuurayo kayd maxalli ah.
Nadiifinta faylka ku meel gaadhka ah iyo qashinka.
Awoodda lagu dooran karo waxa la xoojiyay (goobta oo dhan, faylalka goobta kaliya, ama kaydka xogta).
Nuqullada la soo dejisan karo.
Ogeysiinta iimaylka degdega ah kadib dhamaystirka soo celinta
Diiwaanka hawlqabadka ee cilad-raadinta fudud.
WPvivid Backup Plugin waa bilaash in laga soo dejiyo oo laga isticmaalo Hagaha Plugin ee WordPress. Nooc qaali ah oo leh astaamo dheeri ah ayaa ku jira shaqada. Si kastaba ha noqotee, astaamahan asaasiga ah waxay ahaan doonaan kuwo bilaash ah inaad ku isticmaasho boggaaga WordPress.
Fiiri Qaabka Wareejinta Hal-guji ee WPvivid
Waxaa laga yaabaa inaysan muuqan sida habka ku lug leh u wareejinta boggaaga WordPress ee domain cusub loo samayn karo hal gujis. Si wax loo nadiifiyo, waxaanu muujin doonaa sifada WPvivid Backup Plugin ee gaarka ah.
Kahor intaadan bilaabin plugin, waxaad u baahan doontaa rakibaad WordPress ah oo ku yaal bogga cusub ee aad rabto inaad ku wareejiso goobtaada. Marka labada goobood ee asalka ah iyo goobta aad u jeeddoba ay diyaar yihiin, ku rakib WPvivid labadoodaba.
Waxaad tan ku samayn kartaa hagaha Plugin, ama aad tagto Plugins > Kudar Cusub gudaha dashboardkaaga WordPress oo raadinta WPvivid. Kadibna ku dhufo Ku rakib iyo Guddi badhannada:
Iyada oo plugin-ku ka shaqeeyo labada goobood, u gudub goobta loo socdo (cusub). Gudaha dashboardka WordPress, u gudub WPvivid> Furaha dhinaca dhinaceeda. Isticmaal hoos-u-dhigga si aad u dejiso muddada dhicitaanka ee furaha socdaalka, dabadeed dhagsii Abuuri badhan:
Nuqul ka samee furaha marka la soo saaro. Ku soo laabo goobtaadii asalka ahayd, dooro WPvivid> U guurista tooska ah laga bilaabo dhinaca dashboard-ka. Kadibna ku dheji furaha goobta la cayimay:
Waxaad markaa isticmaali kartaa badhamada raadiyaha si aad u dooratid inaad rabto inaad wareejiso goobtaada oo dhan, faylasha goobta kaliya, ama kaliya xogta goobta. Haddii aad u guurayso goobtaada oo dhan bog cusub, waxaad u badan tahay inaad rabto inaad doorato Database + Files (Website oo dhan) doorasho.
Sida plugin-ku halkan ku xusayo, natiijooyinka ugu wanaagsan waxaad u baahan doontaa inaad damiso dhowr plugins si ku-meel-gaar ah inta aad dhammaystirayso wareejinta. Kuwaas waxaa ka mid ah 301 dib-u-hagaajin plugins, firewall iyo plugins amniga, iyo plugins kaydinta.
Marka furayaasha lagama maarmaanka ah la joojiyo oo dhammaan goobahaaga iyo furaha goobta ay yaalliin, waxaad riixi kartaa buluugga Transfer badhanka si loo bilaabo socdaalka tooska ah. Haddii ay dhacdo wareejintu guuldareysto, WPvivid sidoo kale waxay taxdaa tillaabooyinka loogu wareejinayo goobtaada gacanta.
U wareejinta boggaaga WordPress si gacanta cusub loogu guuro waa caajis iyo waqti. Waxaa dheer, haddii aadan ka taxaddarin, mar walba waxaa jirta fursad aad si lama filaan ah u waayi karto faylasha goobtaada ama xogta xogta inta lagu jiro habka, taas oo u horseedi doonta masiibo ku dhacda boggaaga.
WPvivid waxay siisaa xal gurmad toos ah oo fudud oo loogu talagalay WordPress. Waxaad ku nasan kartaa inaad hubiso in kaydinta goobtaadu ay ku badbaado bixiyaha kaydinta daruuraha ee aad door bidayso. Xitaa si ka sii fiican, waxay ku siinaysaa hab bilaash ah oo lagu wareejiyo boggaaga WordPress si aad u hesho domain cusub oo leh hal gujin.
Ma waxaad tahay isticmaale Plugin Backup WPvivid? Noo sheeg khibradaada qaybta faallooyinka ee hoose!
Xuquuqda Sawirka leh: Pixabay.
Ku wareeji boggaaga WordPress bog cusub oo hal gujin bilaash ah!
Sida dib loogu dajiyo WordPress (6 Tusaalayaal-Adduunka Dhabta ah)
U samee Bakhaar Sumeysan oo Amazon ah 6 Tallaabo